Ọgwụgwụ nke ochichi onye kwuo uche ya nwekwara ike ịbụ njedebe nke njem nlegharị anya maka Myanmar
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere Myanmar » Ọgwụgwụ nke ochichi onye kwuo uche ya nwekwara ike ịbụ njedebe nke njem nlegharị anya maka Myanmar
Nwe ni myanmar
Njedebe nke ochichi onye kwuo uche na Myanmar nwere ike ịbụ njedebe nke njem? Nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ndị agha na US President Biden na-echegbu onwe ya nke ukwuu.
Ochichi onye kwuo uche nke Myanmar adịgideghị ọbụna afọ 10 na ịkwatu gọọmentị ahọpụtara site n'aka ndị agha ụnyaahụ
Onye isi ala US Biden na odeakwụkwọ nke State Blinken nwere nchegbu gbasara ọnọdụ na njide nke ndị isi gọọmentị ndị nkịtị
Otu afọ nke Mberede ga-enye gọọmentị ndị agha oge zuru ezu iji gbanwee ọchịchị onye kwuo uche ya na ọchịchị aka ike, na-ebibikwa njem na njem njem dị mkpa.
Mianmaa nọ n'okpuru ọchịchị ndị agha na-esochi ọgbaghara nke Mọnde, bụ nke ndị agha jidere de facto onye isi ala Aung San Suu Kyi ma kwupụta ọnọdụ mberede nke afọ niile. Ndị agha kwuru na ndị otu Aung San Suu Kyi meriri na ntuli aka nke November gara aga n'ihi aghụghọ.
Ihe ndị ruuru mmadụ nwere ike ịbụ akụkọ ihe mere eme ọzọ maka mba South East Asia a na onye otu ASEAN.
Na Washington taa Onye isi ala US Biden na Secretary Blinken kwuru, United States na-enwe nchegbu miri emi banyere njide ndị agha Burm jidere ndị isi gọọmentị ndị nkịtị, gụnyere Onye Ndụmọdụ Ọchịchị Aung San Suu Kyi, na ndị isi ọha mmadụ.
Ndị agha Myanmar ewepụtala nsogbu ka ha nwee ike ịbanye ọzọ dị ka onye nzọpụta nke Iwu na mba ahụ, ma merie onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ewu ewu mgbe niile.
Mgbe nyochachara ihe niile, gọọmentị US enyochala na ihe ndị agha Burmese mere na February 1st, na-ewepụ onye isi gọọmentị a họpụtara ahọpụta, mejupụtara agha ndị agha.
United States ga-anọgide na-arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị mmekọ anyị na mpaghara ahụ na ụwa niile iji kwado nkwanye ùgwù maka ochichi onye kwuo uche ya na usoro iwu na Burma, yana ịkwalite ịza ajụjụ maka ndị na-ahụ maka ịkwatu mgbanwe ọchịchị onye kwuo uche nke Burma.
Ndi US ajughi China na agha a.
Mgbanwe ochichi onye kwuo uche ya nke 2011-2012 Burmese bụ usoro na-aga n’ihu nke mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na nhazi na Burma nke ndị gọọmentị na-akwado. Mgbanwe ndị a gụnyere ntọhapụ nke onye ndu onye kwuo uche ya Aung San Suu Kyi n'ụlọ mkpọrọ na mkparịta ụka ndị sochirinụ na ya, nguzobe nke Rightslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ, mmesa izugbe nke ihe karịrị ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị 200, iwu nke iwu ọrụ ọhụụ nke na-enye ndị ọrụ aka ọrụ na iku ọrụ, izu ike nke mmachi mmachi, yana ụkpụrụ nke usoro ego.
N'ihi mgbanwe ndị a, ASEAN kwadoro nnabata Burma maka ịbụ onye isi oche na 2014. Secretary of State nke United States Hillary Clinton gaa Burma na 1 Disemba 2011, iji gbaa ume inwekwu ọganihu; ọ bụ nleta mbụ nke odeakwụkwọ nke US na ihe karịrị afọ iri ise. Onye isi ala United States Barack Obama gara otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, bụrụ onye isi ala US mbụ gara mba ahụ.
Ndị otu Suu Kyi, National League for Democracy, sonyere na ntuli aka ntuli aka emere na 1 Eprel 2012 mgbe gọọmentị kagburu iwu ndị dugara na NLD maka nnabata nke Ntuli aka elu nke 2010. O duru ndị NLD ka ha merie na ntuliaka imeụlọ ahụ, merie 41 n'ime 44 n'ime oche ndị a na-azọ, ya na Suu Kyi n'onwe ya merie oche na-anọchite anya ya Kawhmu Mpaghara na Ulo ala nke Ndị omeiwu Burmese.
Nhọrọ 2015 Nsonaazụ nyere Njikọ Mba maka Democracy an zuru oke oche nke oche abụọ nke omeiwu Burma, zuru iji hụ na onye ọ ga-eso na-abụ president, mgbe onye ndu NLD Aung San Suu Kyi bụ iwu machibidoro onye isi ala. Otú ọ dị, esemokwu dị n'etiti ndị agha Burmese na ndị otu mgba okpuru obodo gara n'ihu.
Omeiwu ọhụrụ zukọrọ na 1 February 2016 na, na 15 March 2016, Htin Kyaw hoputara ya dika onye isi ndi agha n’adighi agha nke obodo kemgbe Nchịkwa ndị agha nke 1962. Aung San Suu Kyi chere na ọrụ ọhụrụ e kere eke nke Ndụmọdụ Ọchịchị, ọnọdụ dị ka Prime Minista, na 6 Eprel 2016.
Nnukwu mmeri nke Aung San Suu KyiOtu Njikọ Mba Na-ahụ Maka Ọchịchị onye kwuo uche ya na nhoputa ndi ochichi nke 2015 emeela ka olileanya maka mgbanwe mgbanwe nke Myanmar site na ejidere ya agha chịru ẹphe usoro ochichi onye kwuo uche ya. Agbanyeghị, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'ime, na-agbada aku na uba na agbụrụ esemokwu na-aga n'ihu ịgbanwe ochichi onye kwuo uche nke na-egbu mgbu. Ogbugbu 2017 nke Ko Ni, onye ọkaiwu Muslim ama ama na onye otu isi MyanmarA na-ahụ ndị otu National League for Democracy na-achị achị dị ka nnukwu ihe na-emebi mba na-emebi emebi ochichi onye kwuo uche. Egburu Maazi Ko Ni Aung San Suu Kyi nke echiche ya dị ka onye ndụmọdụ, karịsịa na mgbanwe MyanmarEdebere iwu ndị agha na iwebata mba ahụ ochichi onye kwuo uche.
OTDYKH Ntụrụndụ Expo iji Nye Malite na Iweghachite Nlegharị Anya na mbipụta 27th
Nchọpụta Ọrụ Ọrụ na Remote maka Microsoft 365
Allegiant na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ Onye isi ala / Ndụmọdụ Ndụmọdụ